यस्तो छ सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ मर्यादाक्रम, कोभन्दा अगाडि को ? — sancharkendra.com
यस्तो छ सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ मर्यादाक्रम, कोभन्दा अगाडि को ?
सरकारले नयाँ सरकारी मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैसम्पन्न बैठकले मर्यादाक्रमको टुंगो लगाएको हो । जसमा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीभन्दा माथि राखिएको छ ।
सचिव, प्रहरी प्रमुख, उपमहानगरका प्रमुख रकाठमाडौंका उपमेयरको मर्यादाक्रम एउटै कायम गरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख १४ औं र गाउँपालिकाका प्रमुख १५ औं नम्बरमा हुँदा सरकारका उपसचिव, प्रमुख सेनानी १७ औं नम्बरमा छन् ।
यसैबीच सरकारले महेन्द्रनगर विकास समिति विघटन गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महेन्द्रनगर विकास समिति विघटन लगायत विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिएका हुन् ।
त्यस्तै नेपाली सेनाका सात जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरी पदोन्नती गर्ने तथा १३ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभवहरुको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्री परिषद बैठकले गरेका १४ निणयहरु– नेपाल विशेष सेवा (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरिएको छ।
नेपालगञ्ज ९बाँके० रंगशाला परिसरभित्र रहेको दुई कठ्ठा सात धुर जग्गा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई स्वीकृति दिइएको छ। त्यस्तै सात जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने र १३ जना महासेनानीलाई सरूवागर्ने निर्णय गरिएको छ।
दूरसञ्चार (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव डा। संजय शर्मालाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी भाग लिन पठाउने निर्णय गरिएको छ। नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संशोधित विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ। झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ बमोजिम गठित समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर, झापाका श्री राधाकृष्ण खनाललाई र समितिको सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका श्री मदन प्रसाद अधिकारीलाई तोक्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ। महेन्द्रनगर नगर विकास समिति विघटन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विकास समितिहरूमध्ये निम्न विकास समितिहरू संघ अन्तर्गत रहने गरी कायम गरिएको छ–
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री दिलिपराज रेग्मीको सेवा अवधि तीन वर्ष पुरा भएकाले पुस २३ देखि लागू हुनेगरी निजलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सेवाबाट अवकास दिने निर्णय गरिएको छ। रिक्त रहने उक्त पदमा विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री गणेशकुमार अधिकारीलाई सोही दिनदेखि लागू हुनेगरी बढुवा गरिएको छ।